ဝမ်းချုပ်တတ်သူများအတွက်.. လွယ်ကူထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းများ – ရှအေလငျး
ဝမ်းချုပ်တတ်သူများအတွက်.. လွယ်ကူထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းများ
( ၁ ) နံနက်အိပ်ရာထ သောက်ရေ နှစ်ခွက် ဆက်တိုက် သောက်ပေးခြင်းက အူတွေကို အလုပ်လုပ် စေလို့ ဝမ်းသွားစေပါတယ် ။ ( နေ့စဉ် ရေရှစ်ခွက်မှ ၁၀-ခွက်အထိ သောက်တဲ့အကျင့်ကို မွေးမြူပါ ) ။ . ။
( ၂ ) သံပရာသီး ကလည်း ဝမ်းချုပ်ခြင်းမှ သက်သာစေလို့ နံနက်အိပ်ရာထ အစာမစားခင်မှာ ရေ နွေး တစ်ဖန်ခွက်ထဲကို သံပရာသီး တစ်လုံး ညှစ်ပြီး ၊ ပျားရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းနဲ့ ဆား အနည်းငယ် ဖျော်၍ သောက်ပါ ။ . ။
( ၃ ) ပဲသီး ၊ ဟင်းနုနယ် စတဲ့ အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် များနဲ့ လိမ္မော်သီး ၊ သစ်တော်သီးကဲ့ သို့ အရည်ရွှမ်းပြီး အမျှင်များတဲ့ သစ်သီးများ စားပါ ။ . ။
( ၄ ) အမျှင်ဓာတ် ပေါများသော ဂုန်လျှော်စေ့က အစာကြေစေပြီး ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေ ပါတယ် ။ . ။
( ၅ ) နွားနို့ပူပူ သောက်ခြင်းက အူမကြီးကို ကောင်းစွာ လှုံ့ဆော်ပေးတာကြောင့် ဝမ်းမချုပ်စေ တော့ပါဘူး ( သို့မဟုတ် ) ညအိပ်ရာဝင်ခါနီး နွားနို့ ပူပူထဲမှာ ထောပတ်ကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ် ဇွန်း ပမာဏ ခပ်၍ သောက်ခြင်းဖြင့် နံနက်ပိုင်း ရှောရှောရှုရှု ဝမ်းသက် စေပါတယ် ။ . ။
( ၆ ) နံနက်စောစော ( ၁၅ ) မိနစ်ခန့် လမ်းသွက်သွက် လျှောက်ခြင်းက အူများကို လှုပ်ရှားကာ ဝမ်းသွား စေပါတယ် ။ . ။
( ၇ ) သဖန်းသီး ၊ ပဲကတ္တီပါ ၊ မြေပဲ ၊ စွန်ပလွန်သီး၊ ပဲပင်ပေါက် စားပေးပါ ။ မာလကာသီး (အူနီ) အမှည့်ကလည်း ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ် ။ . ။
( ၈ ) ကြံရည်၊ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ beet root ( ခေါ် ) သကြား မုန်လာဥ ( ခေါ် ) သွေးရောင်ကဲ့သို့ မုန်လာဥနီ အလုံးတို့ကလည်း ဝမ်းသက်စေလို့ စားပေးပါ။ . ။
( ၉ ) နံနက်တိုင်း သင်္ဘောသီး မှည့်မှည့် စားပါ ။ . ။
( ၁၀ ) ပန်းသီးကလည်း ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ကောင်းကျိုးပြုတဲ့ အတွက် တစ်နေ့နှစ်လုံး မှန်မှန် စားသင့်ပါတယ် ။ . ။
( ၁၁ ) အရွက်မှာ အမွေးလေးတွေ ပါတဲ့ ကုလားမြင်းခွာ ရွက်ပင်၏ အပွင့်ကို သကြားနဲ့ ကြိတ်၍ စားပါ ။ . ။
( ၁၂ ) ကြက်ဟင်းခါးသီးကို သောက်ရေ ၊ ဆားတို့နဲ့ စိမ်ပြီး သောက်ပါ ။ . ။
( ၁၃ ) ကြက်ဟင်းခါးသီးကို ရေနံဆီဖြင့် စိမ်၍ ဝမ်းဗိုက်ကို လိမ်းပေးပါ ။ . ။
( ၁၄ ) ကြိတ်မှန်ရွက် ( ၂၅ ) ကျပ်သားကို ထန်းလျက် ၁၀-ကျပ်သား ၊ အရည်ညှစ်ပြီးသော ရှောက်သီးဖတ် ၁၀- ကျပ်သား၊ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ကြက်သွန်နီ ၁၀-ကျပ်သား၊ စမုံမျိုးငါးပါးကို အမှုန့်နှစ်ပဲ၊ စားဆီတို့ဖြင့် ရောချက်ထားသော ကြိတ်မှန်ရွက်ယိုကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းခန့် တစ်နေ့ သုံးကြိမ် စားပေးပါ ။ . ။
( ၁ ) နံနကျအိပျရာထ သောကျရေ နှဈခှကျ ဆကျတိုကျ သောကျပေးခွငျးက အူတှကေို အလုပျလုပျ စလေို့ ဝမျးသှားစပေါတယျ ။ ( နစေ့ဉျ ရရှေဈခှကျမှ ၁၀-ခှကျအထိ သောကျတဲ့အကငျြ့ကို မှေးမွူပါ ) ။ . ။
( ၂ ) သံပရာသီး ကလညျး ဝမျးခြုပျခွငျးမှ သကျသာစလေို့ နံနကျအိပျရာထ အစာမစားခငျမှာ ရေ နှေး တဈဖနျခှကျထဲကို သံပရာသီး တဈလုံး ညှဈပွီး ၊ ပြားရညျ လကျဖကျရညျဇှနျး တဈဇှနျးနဲ့ ဆား အနညျးငယျ ဖြျော၍ သောကျပါ ။ . ။
( ၃ ) ပဲသီး ၊ ဟငျးနုနယျ စတဲ့ အစိမျးရောငျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ မြားနဲ့ လိမ်မျောသီး ၊ သဈတျောသီးကဲ့ သို့ အရညျရှမျးပွီး အမြှငျမြားတဲ့ သဈသီးမြား စားပါ ။ . ။
( ၄ ) အမြှငျဓာတျ ပေါမြားသော ဂုနျလြှျောစကေ့ အစာကွစေပွေီး ဝမျးခြုပျခွငျးကို သကျသာ ပြောကျကငျးစေ ပါတယျ ။ . ။
( ၅ ) နှားနို့ပူပူ သောကျခွငျးက အူမကွီးကို ကောငျးစှာ လှုံ့ဆျောပေးတာကွောငျ့ ဝမျးမခြုပျစေ တော့ပါဘူး ( သို့မဟုတျ ) ညအိပျရာဝငျခါနီး နှားနို့ ပူပူထဲမှာ ထောပတျကို လကျဖကျရညျဇှနျးတဈ ဇှနျး ပမာဏ ခပျ၍ သောကျခွငျးဖွငျ့ နံနကျပိုငျး ရှောရှောရှုရှု ဝမျးသကျ စပေါတယျ ။ . ။
( ၆ ) နံနကျစောစော ( ၁၅ ) မိနဈခနျ့ လမျးသှကျသှကျ လြှောကျခွငျးက အူမြားကို လှုပျရှားကာ ဝမျးသှား စပေါတယျ ။ . ။
( ၇ ) သဖနျးသီး ၊ ပဲကတ်တီပါ ၊ မွပေဲ ၊ စှနျပလှနျသီး၊ ပဲပငျပေါကျ စားပေးပါ ။ မာလကာသီး (အူနီ) အမှညျ့ကလညျး ဝမျးခြုပျခွငျးကို သကျသာစပေါတယျ ။ . ။
( ၈ ) ကွံရညျ၊ ခရမျးခဉျြသီးနဲ့ beet root ( ချေါ ) သကွား မုနျလာဥ ( ချေါ ) သှေးရောငျကဲ့သို့ မုနျလာဥနီ အလုံးတို့ကလညျး ဝမျးသကျစလေို့ စားပေးပါ။ . ။
( ၉ ) နံနကျတိုငျး သင်ျဘောသီး မှညျ့မှညျ့ စားပါ ။ . ။
( ၁၀ ) ပနျးသီးကလညျး ဝမျးခြုပျခွငျးကို ကောငျးကြိုးပွုတဲ့ အတှကျ တဈနနှေ့ဈလုံး မှနျမှနျ စားသငျ့ပါတယျ ။ . ။
( ၁၁ ) အရှကျမှာ အမှေးလေးတှေ ပါတဲ့ ကုလားမွငျးခှာ ရှကျပငျ၏ အပှငျ့ကို သကွားနဲ့ ကွိတျ၍ စားပါ ။ . ။
( ၁၂ ) ကွကျဟငျးခါးသီးကို သောကျရေ ၊ ဆားတို့နဲ့ စိမျပွီး သောကျပါ ။ . ။
( ၁၃ ) ကွကျဟငျးခါးသီးကို ရနေံဆီဖွငျ့ စိမျ၍ ဝမျးဗိုကျကို လိမျးပေးပါ ။ . ။
( ၁၄ ) ကွိတျမှနျရှကျ ( ၂၅ ) ကပျြသားကို ထနျးလကျြ ၁၀-ကပျြသား ၊ အရညျညှဈပွီးသော ရှောကျသီးဖတျ ၁၀- ကပျြသား၊ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ကွကျသှနျနီ ၁၀-ကပျြသား၊ စမုံမြိုးငါးပါးကို အမှုနျ့နှဈပဲ၊ စားဆီတို့ဖွငျ့ ရောခကျြထားသော ကွိတျမှနျရှကျယိုကို လကျဖကျရညျဇှနျး တဈဇှနျးခနျ့ တဈနေ့ သုံးကွိမျ စားပေးပါ ။ . ။
မန္တလေးမှာ ဆိုင်ကယ်သူခိုးကို ကောင်မလေး၅ယောက် လမ်းပိတ်ပြီး ဖမ်းပေးတာ လေးစားတယ်
ပြင်းထန်တဲ့ အပူဒဏ်ရဲ့ ဆိုးကျိုးကို ဖော်ပြနေတဲ့ အထူးခြားဆုံး မြင်ကွင်းများ
ရေလှိုင်းလေးတွေအတိုင်း လှုပ်ရှားနေတဲ့ ထူးဆန်းလွန်းတဲ့ သဲကန္တရတစ်ခု